Tag: telivishọn | Martech Zone
Mgbe ndị mmadụ na-atụle mgbasa ozi dijitalụ, ha na-ahapụkarị usoro mgbasa ozi ọdịnala dịka telivishọn na redio. Ma ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ụnyaahụ anaghịzi agbasa ozi ing ha na-ejide usoro njikọ aka na ojiji ruo nke abụọ. A na-edekọ mmekọrịta ọ bụla ị na-eme na ntanetị gị ka ọ dịkwuo mma iji bulie mmemme na iche mgbasa ozi. Ihe etinyeburu uru nke ọrụ iyi ọhụụ na-abanye ugbu a na mgbasa ozi telivishọn ọdịnala. A mma n'ụzọ akada
O yiri ka ụfọdụ mgbanwe dị egwu na-ewere ọnọdụ n'ihu ụlọ ahịa dịka ọ gbasara mgbasa ozi. Teknụzụ dijitalụ na-enye ohere dị oke egwu nke na - ebute nsonaazụ dị ukwuu - na ndị na - ere ahịa na - arịba ama. Agaghị m akọwahie nsonaazụ ndị a dị ka iche na ọ bụ ọdịnala na ahịa dijitalụ. Ọ bụ ihe ọkaibe. Mgbasa ozi na telivishọn, dịka ọmụmaatụ, na-eto n'ike nke ịdakwasị ndị na-ekiri ya dabere na mpaghara, omume, na oge. Uche arụmọrụ gara ebe niile
O doro anya na telivishọn bụ usoro ọdịnala siri ike, mana mgbe anyị tinyere omume ihuenyo nke abụọ, ọ dị m ka ụfọdụ ndị na-ajụ mmekọrịta dị mma karịa ndị ọzọ. N'etiti Facebook na Twitter, ahụrụ m ọtụtụ mkparịta ụka na-eme n'ime Facebook karịa na Twitter. Mana na Twitter, a na m ahụ ọtụtụ ederede ndị nwere ike ma ọ bụ ghara ịzaghachi nzaghachi. Ọ bụrụ na ihe televishọn na-eme m obi ọjọọ, o doro m anya na m chọrọ iso na-akparịta ụka